प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना खोप अभियानको शुभारम्भ गर्ने तर आफु नलाउने के जनताले बिश्वास गर्लान त?::Point Nepal
प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना खोप अभियानको शुभारम्भ गर्ने तर आफु नलाउने के जनताले बिश्वास गर्लान त?
काठमाडौं, माघ १४ - नेपालमा बुधबारबाट देशव्यापी रूपमा को,रोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु हुदै छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना खोप अभियानको शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले भने खो,प लगाउने छैनन् ।
खोप पहिलो चरणमा चिकित्सक, नर्स तथा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, शव व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति, एम्बुलेन्स चालक, सरसफाइ गर्ने व्यक्तिलाई लगाइनेछ ।
केही दिनअघि भारत सरकारको अनुदानमा १० लाख डोज खो,प नेपाल ल्याइएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा चार लाख ३० हजारलाई खो,प लगाइने छभने पछि पुनः खो,प आएपछि समुदायस्तरमा लगाइने छ ।
नेपालले भारतको सेरम इन्स्टिच्युट प्रालिले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन खो,प लगाउन लागेको हो । उक्त खो,प भारतमा आपत्कालीन प्रयोगका लागि स्वीकृत भई खो,प लगाउन थालिएको छ । नेपालमा पनि आपत्कालीन प्रयोगका लागि औ,षधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति भएर लगाउन सुरु गरिँदैछ ।
विभागले आपत्कालीन प्रयोगका लागि गत माघ २ गते स्वीकृति दिएको थियो । खो,प १० डोज बराबर ५ मिलि प्रतिभायलमा उपलब्ध छ ।